Yini okufanele ngabe uyayenza eDubai? | Imisebenzi - Umsebenzi - Umsebenzi Wokunakekela Amakhambi Okuhamba eDubai
Dubai idume ngokuthi idolobha lebhizinisi
Yini okufanele uyenze e Dubai
Yini okufanele uyenze ngenkathi ufuna umsebenzi e-Dubai?
Nokho, ngenkathi ufuna umsebenzi eDubai. Kunezinto ezimbalwa okudingeka uzazi ngaphambi kokufaka isicelo. Futhi-ke, sonke siyazi ukuthi akuwona umsebenzi olula ukufeza. Iphuzu elinzima kunazo zonke ukuze ugcine ingqondo yakho iqonde ephuzwini. Ungalokothi wehle futhi ugcine ingqondo yakho isethwe empumelelweni. Qiniseka ukuthi kulula ukubhala. Kunzima kakhulu ukuphatha.
Ngenkathi uzoba ngifuna umsebenzi eMiddle East, kunezinto ezimbalwa okufanele uzigweme. Ikakhulu uma sikhuluma ngokufuna umsebenzi eDubai nase-Abu Dhabi.
Ikhono lokucabanga lidlula ikhono lokubona!
Iningi leJobe elivamile lifuna amaphutha okugwema
I-1. Ulwazi oluningi kakhulu ku-Resume Yakho
Isipiliyoni somsebenzi ngokuqinisekile asisebenzi kwikharikhulamu yepharikhulamu ngaphandle kokuthi ubhale isipiliyoni esiqondile sokwenza umsebenzi. Okuhle kakhulu yilokho okukhombisa ukuthi yini onikela ngayo umqashi ongaba khona eMiddle East.
I-CV yakho kufanele ibe mayelana nokuthi unganikeza umqashi noma umphathi we-HR. Ngoba yiyona nto kuphela ebaluleke kumqashi. Okubi kakhulu I-cv yakho ukubhala lokho okufunwa ngumsebenzi. Qinisekisa ukufaka isipiliyoni esibalulekile kuphela. Isibonelo, awudingi ukufaka iminyaka engu-34 yomlando womsebenzi kusukela uqalile ukuthengisa ugwayi ngamunye nge- $ 1 emphakathini wendawo. Akudingekile ukufaka usuku lwakho lokuphothula esikoleni esiphakeme, noma ini wena bathande ukwenza osukwini lwakho lokuphumula.
Ubani oyincintisana oyinhloko?
Izinkulungwane zabantu zithumela i-CV yazo eDubai. Ngakho-ke, ukukhuluma okujwayelekile, unemizuzwana engu-3 ezungeze kuphela ukwenza umxhaso ngokuqasha noma kumphathi wakwa-HR. Ngakho-ke qiniseka ukuthi i-CV yakho yinhle ngaphambi kokuyithumela emnyangweni wakwa-HR.
Abantu abakhulu abakhona Ukufuna imisebenzi eDaily bangamaNdiya, I-Pakistani futhi Ama-Irani. Ungaqiniseka ukuthi abaningi babo basebenza kanzima ukuthola umsebenzi eMpumalanga Ephakathi. Abaningi bezisebenzi zangaphandle bahlola i-Dubai amabhulogi amathiphu ekufuneni umsebenzi. Futhi basebenzisa ulwazi ukuthola umsebenzi linikeza ngokushesha kakhulu kunakho !.
I-2. Ungalokothi ungeze Ukwaziswa Okuningi Kuncwadi Yakho Yokumboza
Abaphathi beDubai abaqasha nabaphathi bomnyango wakwa-HR akudingeki ufunde ngesipiliyoni sakho sobuphukuphuku. Ngenkathi wehlulekile noma wamukela izikole eziphakeme inkosi yokuphumelela kwe-bar.
Kufanele ubeke kuphela isizathu sokuthi kungani ufuna lo mnikelo womsebenzi. Ungalokothi ubhale lutho mayelana nokuthi kungani kungaba kuhle kuwe. Ngoba usesimweni esibi futhi ufuna usizo. Abaqashi base Dubai vele uzonde lokho.
Elinye iphuzu yizimo zakho zomuntu siqu nezomndeni wakho. Yebo, zona kufanele zihlale ziyimfihlo kuwe kuphela. Njengokuqhubeka kwakho kabusha, umphathi oqashisayo ufuna ukwazi ongakwenzela inkampani.
Yini okudingayo ukugxila?
Zama ngaso sonke isikhathi ukugcina incwadi yakho ekhava ikakhulukazi igxile kulokhu kunikezwa komsebenzi. Qiniseka ukuthi ubeka imininingwane eyanele yokuthi kungani uyisikhulu esifanele ngomsebenzi futhi ofanele ukubonisana nawo. Ngakolunye uhlangothi, qiniseka ukuthi abaqashi bazokuthola njengomuntu obalulekile ovela phesheya.
Njalo uthathe isikhathi ngaphambi kokuba uthumele imininingwane yakho. Qiniseka indlela yokubhala incwadi ekhonjiwe kumqashi ngamunye. Yebo, siyawazi ukuthi kungumsebenzi onzima lowo. Kepha leyo ukuphela kwendlela yokuthola umsebenzi eDubai. Hlala uqondanisa neziqu zakho. Ngakho-ke umqashi uyakwazi ukubona ukuthi kungani ungokhetho oluhle.
I-3. Uhlangabezana neZimfanelo Zakho Zomsebenzi
Qiniseka ukuthi uyahambisana isipiliyoni sakho ngamathuba wemisebenzi anganikezwa. Ukusesha umsebenzi inqubo ende ku-UAE. Ngakho-ke, empeleni, isipiliyoni sakho siqhathaniswa nemisebenzi eklanywe online Yebo, uma ngikhuluma, isipiliyoni sakho sidinga ukusondela kokuphelele eDubai. Ngoba kunezinkulungwane zabantu eMiddle East nase-Asia.
Futhi nsuku zonke bathumela i-CV yabo kulabo abafuna ukuqasha kabusha. Ngakho-ke, zama ukuba nesipiliyoni ngokusondele ngangokunokwenzeka. Futhi qiniseka ukuthi okuhlangenwe nakho kwakho kuyafana phakathi komsebenzi nawe njengophandi.
Kubaluleke kakhulu ukuthatha isikhathi nomzamo ikakhulukazi endaweni ematasa efana neDubai. Futhi ukucinga kancane ukunikezwa kwemisebenzi okufana neziqu zakho nencazelo yomsebenzi.
Kukuwe ukukhombisa umphathi wokuqasha kungani uwuphelele umsebenzi. Shiya ukuqagela ngaphandle kwe-equation.
I-4. Ukubheke ukulungele ukuthatha umsebenzi umzuzu nje emva kweNgcabulo
Yebo, elinye iphutha lelo ongakwenza ukugqoka nje ngokungafanele engxoxweni yomsebenzi eDubai. Leli lizwe empeleni, liyizwe lamaSulumane, kepha izimiso zebhizinisi lisebenza kahle kuleli.
Zama ukuthi ungadli ngokweqile ohlelweni lokuxoxisana. Ngoba lokho kungakulimaza cishe ngokufana nokubukeka njengesidenge. Ngaphambi uthola isimemo somhlangano ukuzama ukwenza ucwaningo oluncane kwinkampani nemvelo yomsebenzi.
Ungakwazi yini ukubuza abanye umbono othembekile?
Ngabe ukhona umuntu omaziyo enhlanganweni osanda kufaka isicelo? Uma kungenjalo sebenzisa i-Linkedin futhi ubuze abantu abasebenza lapho ukuthi bafuna ikhodi yokugqoka. Ngakho-ke, uma ungaqiniseki ngemininingwane yenza abanye babone ukuthi ilula futhi iyasebenza. Buza abanye ukuthi bagqoke ini nsuku zonke. Lokho kuzoba yinto yokuqala umphathi oqasha uzokwazisa eDubai.
I-5 Isho Into Engalungile Ngomsebenzi Wokuxoxisana
Iphuzu lesihlanu likusho ngokusho izinto ngesikhathi esifanele. Njengoba usanda kufaka isicelo nge-resume ne-cover cover. Umqashi ovela e-Dubai uzoba nombono othile mayelana ukuthi ungubani nokuthi wenzelani ukuziphilisa.
Ngaphezu kwe-60% yohlobo olubi lwemininingwane yokukhuluma. Akufanele kushiwo, ukuthi kungcono ushiywe ungabhekelwa ekungafaneleni imininingwane ngesikhathi sokuxoxisana nomsebenzi. Isibonelo, ibhizinisi lakho siqu noma lebhizinisi lehluleka ngesikhathi sokuthuthukiswa kwamakhono. Noma ngakolunye uhlangothi, kungani ube negebe lezinyanga ezimbalwa kulwazi lwakho.
Yini okudingayo ukugxila ke?
Ingxoxo kumele ibe yikho konke ongakwenzela inkampani uma unikezwe umsebenzi. Yabelana ngamakhono neziqu ezikwenza ube ngumuntu ofaneleki waleso sikhundla. Yini okufanele ngabe uyayenza eDubai ?.
Uzigxile ekwenzeni umdlalo phakathi kwakho nokunikezwa umsebenzi. Ngakolunye uhlangothi, ukusho okukhulu kakhulu kungakuxosha ekukhetheni ukhetho ukuze uthole umsebenzi.
I-6 Stop - Izimpendulo Zemibuzo E-UAE
Izwe lase-United Arab Emirates indlela engcono ukwedlula noma imaphi amazwe. Futhi ngokuqinisekile eDubai, Abu Dhabi noma Sharjah uzoba nengxoxo engazange iphumelele.
Kwesinye isikhathi, bekungafanele kube nje, futhi isipiliyoni sakho siyindlela elungile yalokhu kunikezwa komsebenzi. Noma ukwazi ukuphumelela i-interview futhi awukayishongo ku-UAE.
Kodwa-ke, kukhona izingxoxo ezithile namaphutha ajwayelekile angagwemeka kalula. Isibonelo, ungephuzi, ungalokothi ulinde ukubuyiselwa emuva. Kungcono nje ukushayela i- ongaba ngumqashi kabusha futhi imkhombisa ukuthi ufuna umsebenzi.
I-7 Qinisekisa ukuthi unezinkomba ezivela e-UAE
Okukodwa imininingwane ebalulekile yokuthola umsebenzi eDubai. Imane nje ibe neqoqo lezethenjwa ezivela enhlanganweni esekwe eDubai ku-CV yakho. Futhi uhlale ulungele ukunikeza imininingwane yokuxhumana lapho wenza umsebenzi ufuna.
Abaphathi beMithombo Yabantu bazobukeka ngamunye wabo.
Icala elibi kakhulu ongafuni ukwenzelwa ukuthola abaphathi bakho ngomzuzu wokugcina futhi ubatshele ukuthi udinga ukunikeza umuntu ofanele ungaqina kangakanani
Ekuqaleni, shaya umnyango wakho we-HR. Ngemuva kwalokho yenza uhlu lwezinkomba ezilungele ukunikeza kepha izinkampani zase-United Arab Emirates kuphela. Yini okufanele ngabe uyayenza eDubai ?. Gcina inketho yakho ivulekile futhi ungalokothi ushise amabhuloho. Awusoze wazi ukuthi uwadinga nini.
I-8 Ikhohlwa Ukulandela Ngemva Kwengxoxo
Enye indlela yokuziphatha embi ukungalandeleli ngemuva kwengxoxo nomsebenzi. Kwezinye izimo kungakusiza ekutholeni umsebenzi. Isibonelo, kuzokunikeza elinye futhi ithuba lokukhumbuza ngawe nokwenza isithombe esihle.
Abaqashi eDubai bathanda ukwaziswa ngesikhathi sabo nomzamo wabo. Ngakho-ke, i-imeyili eyenziwe ngenobuhlakani eyenziwe yabonga ngokuvamile ngosuku oluthile emva kwengxoxo. Ngokuqinisekile kuyindlela enhle yokukubonisa thokozela isikhathi nethuba okufanele ulisebenzise.
Ukulandela futhi kukunikeza elinye ithuba lokuphinda ungeze amanye we izinto ezibalulekile ozikhohliwe. Isibonelo, noma yini ofisa ukuthi ngabe uyishilo ngenkathi kwenziwa izingxoxo. Njengokuhlangenwe nakho kwakho nenkampani ye-xyz. Noma isitifiketi esengeziwe lokho kungabasiza ukuthi bathathe isinqumo sokukuthatha.
9 Ukushiya Umsebenzi Wakho Nge-Feedback Negative
Iningi lama-expats eDubai. Abacabangi ngendlela efanele. Well, Okufanele ukwenze eDubai ?. Ukungasho lutho olubi ngenkampani lapho uphila.
Ngoba kunendaba ukuthi uthini endleleni yokuphuma enhlanganweni. Futhi ngokuqinisekile abaphathi, basakukhumbula. Ngakho-ke, umbono ngawe kwenzeka yini esikhathini eside.
Isibonelo, abazoba ngabaqashi kabusha bahlola izinkomba kusuka ku-3 yokugcina kuya kubaqashi be-6 Ngakho-ke, uma ushiye umsebenzi wakho wokugcina kunothi olubi. Futhi abaphathi abavela lapho bazothi uma wenze inkohliso kungabuya ukukushaqisa. Ngakho-ke, zama ukusebenzisa ubuchopho bakho futhi ugcine ukufundwa kwemizwelo. Ngaphezu kwalokho, ungalokothi utshele inkampani yakho yangaphambili lokho kwakuyiphutha.
10 Yini okufanele uyenze e Dubai ukuze usinde?
Ngaso sonke isikhathi zama ukugcina ingqondo yakho ngendlela efanele. Ungalokothi uzame ukwenza inkohliso. Indlela enhle kunazo zonke, ukwethembeka, futhi ukusebenza kanzima ukufeza umgomo. IDubai yizwe eliqinile kakhulu elingavumeli noma yimuphi umsebenzi wobulelesi. Ngaphezu kwalokho, noma yisiphi isinqumo esibi sizokufaka enkingeni futhi uzongena ku ijele lendawo eDubai noma uzodingiswa ezweni lakini. Lokho iqiniso, futhi kuzosebenza kuwe.
Ikhono lokucabanga ngaphambi kwekhono lokwenza…
Ukuhamba kwe-Smart kuzokwenza yenza umsebenzi wakho wephupho utholakale!
Unalokho engqondweni, AmaNdiya nasePakistan bezama ukuthola umsebenzi e-UAE. Ngakho-ke, ngomncintiswano onamandla wansuku zonke, le misebenzi ibonakala ingenakwenzeka. Kepha empeleni, kumane nje kuyizwi.
Ngakho-ke, zitholele wena futhi setha izingxoxo ezimbalwa zemisebenzi khona lapho. Manje uyazi ukuthi yini ongeke ukwazi ukuyenza eDubai. Manje yisikhathi sokwenza umsebenzi wakho wokuzingela ungene ezinhlelweni zomsebenzi. I-CV nencwadi eyikhava kufanele ibe yipoll futhi ibhalwe kahle.
Ungamisa kanjani i-interview? Kwenze nje!
Noma kunjalo, eziningi zezidingo, ngisho nabaphathi abanolwazi eNingizimu Afrika futhi AmaPhilippines. Ngezinye izikhathi ukuthola kunzima ukuthola ingxoxo ehloniphekile ebhizinisini lesayizi eliphakathi.
Udinga ukugwema uhlobo oluthile lwamaphutha eDubai. Ngoba bazokwehlisa amathuba akho okuthola inketho yokuthola isikhundla somsebenzi. Futhi ngokuqinisekile wehlise ithuba lakho lokuthola lokho umsebenzi othile wokuphatha onikezwayo.
Sizama njalo ukuqinisekisa abafuna umsebenzi abavela phesheya. Ukuthi imithetho efanayo ifaka zonke i-expat e-Dubai. Futhi iMpumalanga Ephakathi ngokuqinisekile yindawo enhle elinde ikusasa lakho.
Ngakho, uma ulandela Imithetho efanelekayo ye-UAE. Kufanele uthole umsebenzi eDubai noma ku-Abu Dhabi. Futhi njalo zama ukwenza iphupho lakho lisebenze, kube ngokoqobo. Akunandaba ukuthi kubukeka kanjani okubi. Zama ukugwema imigodi. Futhi ulwe nomoya wokugcina.
Yiziphi amaqhinga asetshenziswa njengomfundi osanda kuthweswa iziqu?
Esikhundleni esibi kunayo yonke abafundi abasanda kuqeda izifundo ze-MBA. Akukwenzi mqondo ukuthi kungani bonke abafundi abancane bengazukuthola ithuba ukuthola umsebenzi eDubai.
Abafuna umsebenzi omncane kakhulu bazozama ukwenza lesi sikweletu esikhulu ngemuva kwabo uthweswe iziqu enyuvesi. Futhi bayoshiywa bodwa. Ngakho-ke, empeleni, badinga ukwenza imali kakhulu.
Njengomuntu omusha emakethe yemisebenzi eDubai. Udinga ukuqala phansi, uyeke ukucabanga ukuthi ungumuntu ofundile. Udinga ukuqala ukhuphuke kancane ezweni elinobumbano. Ukusuka lapho-akukho okuhlukile. Okomuntu othile noma ngabe ufunda ziphi izigaba phatha ukwenza ukuze uthole umsebenzi eDubai.
Yiziphi amaqhinga asebenzisa njengoMphathi e-Dubai?
Abantu abanolwazi kakhulu abanezinketho eziningi. Kepha e-United Arab Emirates, kukhona umhlaba womlomo nokuxhuma njengento eyodwa ekuvumela ukuthola umsebenzi ezingeni labaphathi.
Ungase ucabange ukuthi akulungile ngawe njenge-expat. Kodwa ingabe ungayinika inkampani yakho kumuntu ongawaziyo ?. Ngakho, i-Dubai inomusa omuhle kodwa kunomthetho okufanele ulandele. Futhi uma uqasha umuntu ongalungile futhi wenza amaphutha.
Ngeshwa, kuyiphutha labaxhasi futhi ngokusemthethweni unesibopho sokukulungisa lokho. Futhi ezimweni eziningi ukuthi kuthatha ingcindezi eningi nemali enkulu futhi izinyanga ezimbalwa isikhathi.
Isiphetho - Yini okufanele uyenze e Dubai?
Ukufuna umsebenzi ku Dubai kudinga isethi sokubekezela nokuzimisela. Ngakho, ngokukhuluma, akuwona wonke umuntu oyobusiswa ngokuthola umsebenzi ku idolobha elihlakaniphile. Ngiyethemba ukuthi uthole izeluleko ezimbalwa ezivela eDubai City Company. Futhi uzozisebenzisa ukufeza umsebenzi wakho wamaphupho eDubai.
Vuselela njalo i-Curita Vitae yakho. Ngemuva kwalokho gcina incwadi yakho yesembozo yenzelwe ngokukhethekile ukunikezwa umsebenzi. Thumela i-CV njalo futhi hlola isipiliyoni sokukhangiswa komsebenzi ngaphambi kokuthumela i-CV kubaqashi abangaba khona.
Nokho, ngaphambi kokuthi abantu bakwazi ukukopela ku-CV. Kepha lezo zikhathi zifika ekugcineni. Manje isheke elula yasemuva seyenziwe cishe sonke isigungu. Ngakho-ke, uma bebheka ukuthi kuzolimaza kakhulu kunokuhle. Futhi eDubai, kukhona umugqa omncane nangokwethembeka kwakho.
Yini okufanele uyenze ukuze uthole umsebenzi ku-UAE?
Ngaphambi kokuthi Uhambe!
Okufanele ukwenze ngaphambi kokuya !. Yehla uhlu lwamathuba emisebenzi futhi usebenzise ngamunye ngamunye. Ngemisebenzi emihle onayo kufanele ukuthi ufake isicelo kuphela kumasayithi wemisebenzi esemthethweni.
Hlola umeluleki we-scam futhi ube nolwazi oluphelele mayelana nenkampani efanelekile. Oxhumana nabo ababalulekile noma izethenjwa bayadlala iqhaza elibalulekile ekutholeni imisebenzi. Nhlanhlatha ku-inthanethi nasemicimbini esemthethweni ukuthola amathuba emisebenzi amaningi.
Ngakho-ke, iya kuwebhusayithi bese wengeza ikheli le-web. Uthola lezi zinkampani kunzima ukuhlola online. Akufanele ucabangele ukukhokha noma yimuphi walaba basebenzi. Abanye babo bangakwazi sikusize ekutholeni imisebenzi. Kepha ngeshwa, iningi lazo liyizinkampani ezigcwele umkhonyovu nje.
Ukucabangela konke okushiwo ngenhla!
I-Dubai nokusesha umsebenzi ngokusobala kuyimali enzima ukuphatha. Isithiyo esiningi nezinkulungwane, kunjalo, ukuthola umsebenzi wakho wamaphupho mhlawumbe akukufanele nakancane ekugcineni.
Uzobe uthola izipesheli zemisebenzi ngamakhono athile ayisisekelo afana kwamakhasimende amakhasimende amathuba ayisisekelo. Kodwa-ke, ukuthola isikhundla samaphupho akho kungenzeka kungenzeki eDubai ekuqaleni. Ngakho-ke, zama ukuthola noma imuphi umsebenzi owunikezwayo ekuqaleni bese uqhubekela phambili ezingeni lenkampani. Ngakho-ke, Okufanele ukwenze eDubai? Ngokuqinisekile yenza imbongolo yakho iye esigabeni esilandelayo. Ukusesha kanzima kwemisebenzi nokusebenza okuhle. Ima ukuphupha ngemisebenzi yamaphupho ama-Arabhu.
IDubai City Company manje ihlinzeka ngemikhombandlela emihle yemisebenzi eDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu Imisebenzi e-Dubai Guides. Ngakho, ngalokhu engqondweni, manje ungathola iziqondiso, amathiphu kanye nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.